FJKM Ankadifotsy IREO TENY FOLO nomen’Andriamanitra antsika (IREO DIDY FOLO) / Katekomena / Fampianarana / Accueil - FJKM Ankadifotsy
IREO TENY FOLO nomen’Andriamanitra antsika (IREO DIDY FOLO)28/12/2016 03:54
Ireo Teny FOLO nomen'Andriamanitra antsika.
IREO TENY FOLO nomen’Andriamanitra antsika (IREO DIDY FOLO)
Ny nahazatra antsika hatry ny ela dia : « DIDY FOLO » nomen’Andriamanitra antsika. Fa miainga amin’ny teny fototra nanoratana ireo, dia tsy DIDY toy ny « MANERY » no nataon’Andriamanitra, fa TENY maneho ny Fankatoavantsika Azy.
Hita ao amin’ny Eks 20, miverina ao amin’ny Deo 5 ny nanomezan’Andriamanitra ireo TENY FOLO ireo. Koa mety indrindra raha ny Finiavan’ny tsirairay no andraisana ireo.
Mazava tsara fa tamin’ny andro (vaninandro) nanomezan’Andriamanitra ireo Teniny ireo, dia FANEKENA (FIFANEKENA) no antony fa tsy FANERENA, toy ny nitenenan’ny Tompo hatrany am-pahariana izao tontolo izao, hoe : « MISIA MAZAVA », dia nisy Mazava, dia « Manome FISIANA » ho antsika ny Teniny. (cp Jao 1, 12)
Ireto ary ireo TENY FOLO nataony tamintsika.
« TSY HANANA ANDRIAMANI-KAFA IANAO, FA IZAHO IHANY »
Ny toeranAndriamanitra eo amin’ny fiainantsika izany faritany izany.
Ny hoe « MIVAVAKA » mantsy dia « MANEHO ny Fifandraisanao amin’izay Andriamanitra ivavahanao. »,
« TSY HIVAVAKA AFA-TSY AMIN’I JEHOVAH IANAO » izany hoe tsy
hanankina ny fiainanao amin’andriamani-kafa ianao. ANDRIAMANITRA ihany no voalohany eo amin’ny fiainanao. Izy irery no itokianao mandritra ny andro hahavelomanao, tena « IAINANAO » ny Fivavahanao.
« TSY HANAO SARIN-JAVATRA VOASOKITRA IANAO ; ary TSY HIANKOHOKA eo anatrehany»
Ny hoe « miankohoka » dia manaiky, manompo, mivavaka amin’ireo sarin-javatra ireo. TSY SARY (na dia sarin’i Jesoa Kristy aza) no ivavahantsika na iankohofantsika fa Izy amin’ny maha Andriamanitra Azy ; « symbole » (na famantarana) ny Lakroa fa tsy ivavahana.
« TSY HANONONA FOANA NY ANARAN’I JEHOVAH IANAO »
Ny fampiasana ny anaran’Andriamanitra amin’ny tsy marina, amin’ny fanao ratsy (toy ny MAGIE , JORO …) dia « fanononana FOANA ny Anarany », ka TSY HO AFA-MAINA amin’izany izay manao izany.
Ny Eksodosy 20 dia mampianatra hoe « MAHATSIAROVA NY ANDRO SABATA »(Zakôr)
Fa ny Deoteronomia 5 kosa dia manao hoe « MITANDREMA » ny andro Sabata (Samôr)
Ny eksodosy 20 dia te hampatsiaro sy hitaona ny zanak’Israely ho amin’ny FITSAHARANA (FANAFAHANA) omen’Andriamanitra azy ; fa fony mbola tany Egypta izy dia TSY NITSAHATRA. Nohafahan’Andriamanitra izy ka tonga marika hahatsiarovany izany ny SABATA ;
Fa ny deoteronomia kosa dia « MAMPORISIKA » (exhorter) mba hiaina ny FANAFAHAN’Andriamanitra azy.
MARIHO TSARA FA i Jesoa Kristy tamin’Izy nitsangana tamin’ny maty, no nitondra FANAFAHANA antsika olona tamin’ny FAHOTANA (= fisarahana tamin’Andriamanitra) ka namerina antsika ho eo amin’Andriamanitra.
Ny Andro nitsanganany anefa, ilay andro fahatelo, dia andro ALAHADY, Andro voalohany amin’ny herinandro, hanombohanao ny fiainanao amin’ny maha olona AFAKA anao.
I Jesoa izany no SABATANTSIKA=fitsaharantsika
Hatreto amin’ity teny fahaefatra ity dia MAHAKASIKA an’Andriamanitra mivantana ny Teniny tamintsika.
Fa ny TENY FAHADIMY ka hatramin’ny FAHAFOLO dia isika OLOMBELONA no ivantanany
« HANAJA NY RAY SY RENINAO IANAO mba HO MARO ANDRO amin'ny tany homeny honenanao»
Tsarovy fa TSY NISY ianao raha tsy teo ireo ray aman-dreninao ireo.(Efesiana 6.1-4)
«HO MARO ANDRO » :izay andro miposaka ho anao, dia ANDRO TSARA avokoa.
« TSY HAMONO OLONA IANAO »
Tsy izay « manapitra ny ain’olona » ihany no atao hoe MPAMONO OLONA fa : « na zovy na zovy mankahala ny rahalahiny », dia mpamono olona izy, hoy izy Tompo (cf I Jaona 3.19).
Mianatra amin’ny Tompo ary isika mba TSY HO TEZITRA, KA HANKAHALA ny namantsika araka ny tenin’ny Apôstôly hoe : « TEZERA fa aza manota… »
« TSY HIJANGAJANGA IANAO »
Ny FAMPORAFESANA an’Andriamanitra amin’ny andriamani-kafa, no fijangajangana halan’Andriamanitra indrindra. Ny FIEREMANA na ny FANOMPOAN-TSAMPY , izay FADY indrindra izany.
Fa tena fijangajangana ihany koa ireto :
Ny zatovo milalao afo (« fitiavana ») manaram-po amin’ny « paSIPAsy » (flirt)
Ny fanaovana AKOLAHIM-BOHITRA (fornication)
Ny fanitsakitsahana ny vady andefimandry (adultère)
Matoa ampianarin’ny Tompo TSY HIJANGAJANGA isika, dia FITSINJOVANY ny fiainantsika :ray, reny, zanaka, …izany.
« TSY HANGALATRA IANAO »
Lazaina mazava eto fa ny mangalatra, dia MAKA izay TSY ANAO,
Na mivandravandra, hita maso,
Na miafina any amin’ny « sora-bola » ;
Ny olona manana an’ Andriamanitra eo amin’ ny fiainany dia MINIA tsy maka ny an’olona, fa « MIANINA » (se contenter) amin’izay nomen’Andriamanitra azy, fa izay no SAHAZA amin’ny fiainany.
MITANDRINA izay alaim-panahy miseho ho kinga haka ny an’ny olona _fa ny vitsika mainty eo ambony vato mainty ao amin’ny alina maizin-kitroka aza MISY MAHITA.
« TSY HANAIKY ho vavolombelona handainga ianao »
Ny hoe « vavolombelona » dia sady NANDRE no NAHITA ka mijoro ho
« mpanamarina izay HILANA ny teniny ». Miankina amin’ny fahamarinanao (fidélité) ny hanamelohana na tsia izay voapanga ka hilàna ny teninao.
Tsy azo atao ny « milaza izay tsy nataon’ny Tompo taminao » mba hijoroana ho vavolombelon’ny Tompo.
« TSY HITSIRIRITRA izay an’ny namanao ianao »
Mandrisika anao hikatsaka (hiasa, hikarataka) mba hananana ny TSARA hatrany ny TSY FITSIRIRITANA.
Hoy indrindra ny apôstôly Paoly : « izay tsy mety MIASA aoka izy tsy HIHINANA »